Isu takaedza iyo Dodocool isina mota mota charger | IPhone nhau
Karim Hmeidan | | IPhone zvishongedzo, iPhone 8, iPhone X
Chishanu chinotevera musi wa27 ndiro zuva ratinogona kutanga kubhuka idzva redu iPhone X, iyo yakanakisa iPhone yakaburitswa nevakomana pabhokisi. Kubva ipapo, yave nguva yekutarisa zvese zvitsva zvinowirirana neiyi nyowani iPhone X, uye nekutenda kune zvimwe zvacho zvitsva maficha, sarudzo dzeanowirirana accessories dzinokura.
Zvese zvitsva iPhone X uye iPhone 8 vanouya nazvo idzva isina waya kuchaja, nzira nyowani yekuchaja zvishandiso zvedu nekuda kwekombiki yemagetsi yakavanzwa kuseri kwemabutiro egirazi ekumashure Zvino chii, iwe urikufunga nezve kuwana itsva isina waya charger? Nhasi tinokuunzira iyo dodocool isina waya charger, nyowani isina waya charger yemota yakagadzirirwa kuti tikwanise kurodha yedu nyowani iPhone 8 kana iPhone X ine waya isina waya.
1 Kutengesa zvisina waya mumotokari kunowanikwa kune vese
2 Tsigiro mbiri mune imwechete kusangana nezvatinoda
3 Ndekupi kwekutenga iyo Dodocool isina waya mota charger?
Kutengesa zvisina waya mumotokari kunowanikwa kune vese
Kuvhiya kwacho kuri nyore senge chivhariro mundiro mumudzanga wakareruka chinongedzo chemota yedu, bracket ine yekuisa ye micro usb Kuti charger isina waya ishande, uyezve isu tinongofanirwa kuisa iPhone yedu mumubati, zvinobva zvangoerekana zvatanga kuchaja sezvaungaona mumufananidzo. Chinhu chakashata ndechekuti tambo USB inouya mubhokisi rezvigadzirwa yakanyanyisa kukora saka kana iwe uchida kuiviga nedashboard ku kuisanganisa zvakakwana mumotokari yako kunozokuomera, chimwe chinhu chatisina kufarira.
Tsigiro mbiri mune imwechete kusangana nezvatinoda
Sezvauri kuona mumufananidzo wapfuura, isu tafunga kushandisa rutsigiro rwakachengetwa mumhepo yekudyira mota yedu, inoshanda nemhando ipi neipi yegridhi Sezvo rutsigiro rwuchitenderera nekuda kwedu, hongu, hatina kuchida kana nekuda kwekukura kwerutsigiro uye neiyo iyo iPhone pachayo, pakupedzisira tichazopedzisira tarova tsigiro kana tiinayo padyo negear lever. Iyo mount inouyawo nekapu yekukweva iwe kuti uiise pahwindo yemotokari yako.
Ndekupi kwekutenga iyo Dodocool isina waya mota charger?
Unoda tora iyi itsva isina waya charger kune yako Dodocool mota? Ungofanire kupinda Amazon, muparidzi wepamutemo weDodocool, kuburikidza Iyi link. Iwe unayo inowanika so chete 39,99 € saka iri sarudzo huru kana iwe uchitsvaga a chaja yemota yako kubva pamutengo mumwe chete iwe unowana isina waya imwe uye a tsigiro kune yako iPhone. Ehe, funga nezvese zvinhu izvo zvatisingade kuti tikwanise kusarudza.
3 nyeredzi chiyero
Kuchaja isina waya yemota yedu
Yakanakira avo vasina chajaira isina waya yakavakirwa mumota yavo
Kubvisa mukombe uye mubati wemhepo yekubuditsa
Inotaridzika kunge isina kusimba
Yakakora tambo USB tambo iyo inoita kuti zviome kuiviga padashboard
Dhizaina dhizaini dhizaini
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » IPhone zvishongedzo » Isu takaedza iyo Dodocool isina mota mota charger
Ndakatenga iphone 8 plus alarm yacho haishande, unogona kundibatsira here?